Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Toogasho naxdin leh oo ka dhacday Tansaaniya: nin hubeysan ayaa dhintay
Jebinta Wararka Caalamka • Crime • News • Ammaanka • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Nin hubeysan oo ku sugan Tanzania
Booliska Tansaaniya ayaa toogasho ku dilay nin hubaysan oo la rumeysan yahay inuu asal ahaan Soomaali ka soo jeedo is-rasaaseyn dhexmartay ciidanka booliiska Daarusalaam kaddib markii uu ninkaasi toogtay laba boolis dhacdadii naxdinta lahayd ee maanta dhacday.
Safaaradda Mareykanka ee Tansaaniya ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku sugan dalkaas sababo la xiriira toogasho ka dhacday Dar es Salaam.
Toogashadu waxay ka dhacday meel u dhow Safaaradda Faransiiska oo iyaduna ay deggan yihiin Japan, Kenya, iyo safaaradaha Ruushka iyo weliba hay'ado maaliyadeed.
Lama oga sababta keentay in ninka toogashada geystay uu weerarka geysto.
Safaaradda Mareykanka ee Tanzania ayaa soo saartay digniin in muwaadiniinta Mareykanka ah ay feejignaadaan marka ay baabuurka ku dhex marayaan qeybaha kala duwan ee caasimadda ganacsiga Tansaaniya. Safaaradda Mareykanka waxay ku boorrisay muwaadiniinteeda inay "Ka fogaadaan aagga oo ay la socdaan warbaahinta maxalliga ah wixii macluumaad ah."
Ninka weerarka gaystay oo aan la garanayn oo ku sugnaa magaalada Dar es Salaam ee xarunta ganacsiga Tanzania ayaa toogasho ku dilay 2 boolis ah oo ku sugnaa waddada ugu mashquulka badan agagaarka safaaraddii hore ee Maraykanka ee Tanzania.
Toogashada ayaa ka dhacday Waddada Cali Xasan Mwinyi oo u dhow Buundada Selander galabnimadii, xilliga Afrikada Bari.
Wadayaasha gaadiidka iyo rakaabka oo argagaxsan ayaa ka tagay gawaaridooda oo naftooda u cararay, wariyeyaal goobta joogay ayaa sheegay.
Booliiska ayaa hareereeyay ninka waxayna ku toogteen meel u dhow Safaaradda Faransiiska oo ku taal aagga.
Aagga ayaa sidoo kale hoy u ah dadka deggan iyo xafiisyada howlgallada shisheeye oo ay ku jiraan safaaradaha Japan, Kenya iyo Ruushka, wuxuuna aad ugu dhow yahay hay'adaha maaliyadeed oo ay ku jiraan Bankiga KCB ee Kenya iyo Bangiga Stanbic ee Koonfur Afrika.
Booliska iyo saraakiisha amniga gudaha Tansaaniya weli lama shaacin ujeedka ka dambeeya weerarkaas duhurkii.
Isticmaalayaasha waddooyinka aagga Oysterbay iyo Upanga oo caadi ahaan deggan ayaa lagu qasbay inay ka tagaan baabuurtooda markay naftooda u cararayeen.
Fiidiyowyo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay hawlgal boolisku si wada jir ah ugu soo qaadeen ninka weerarka geystay ka hor inta aan lagu dilin bartamaha waddada ka baxsan albaabka Safaaradda Faransiiska.
Dad goobjoogayaal ah oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ninka dhagarqabaha ah uu dil u geysan karo qaar ka mid ah dadka rayidka ah intii uu toogashadu socotay.
Digniinta amniga ee rasmiga ah ee Safaaradda Mareykanka ayaa u qornayd sidan:
Digniinta Amniga - Safaaradda Mareykanka ee Dar es Salaam, Ogosto 25, 2021
Location: Aagga u dhow Safaaradda Faransiiska ee Waddada Ali Hassan Mwinyi, Dar es Salaam, Tanzania
Event: Kullan Hubaysan oo u dhow Safaaradda Faransiiska.
Waxaa jira warar sheegaya in dagaal hubaysan uu ka socdo meel u dhow Safaaradda Faransiiska ee Waddada Ali Hassan Mwinyi.
Tallaabooyinka la Qaadanayo:
Muwaadiniinta Mareykanka iyo shaqaalaha dowladda Mareykanka waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan aagga.
Duulimaadyada cusub ee u dhexeeya Newark Liberty iyo Reagan...